जीवनका 11 कदम जसले तपाईको पुरै जिन्दगि बदल्न सक्छ । – Bijay Balal
जीवनका 11 कदम जसले तपाईको पुरै जिन्दगि बदल्न सक्छ ।
Home › Motivational(प्रेरक ) › जीवनका 11 कदम जसले तपाईको पुरै जिन्दगि बदल्न सक्छ ।
April 23, 2020 No Comments Bijay Balal
तपाई हामि सबै जुन जिन्दगि बाचिरहेका छौ हुनसक्छ त्यो त्यति अर्थ लाग्दो छैन । आज यस लेखबाट हामि यहि कुरामा ध्यान केन्द्रीत गर्ने छौ कि हामि हाम्रो जीवनलाई कसरी अझै अर्थपूर्ण अर्थात Meaningful बनाउन सकिन्छ भनेर । यसका लागि ११ कदम उल्लेख गरीएको छ जसले साच्चिकै तपाई हाम्रो जीवनलाई Next Level मा लैजान मद्दात गर्ने छ । Lets Start the Journey !
1.संघर्ष जरुरी छ (Struggle is good )
जीवन संघर्ष नै हो । वास्तवमा हामि दुख झेल्नु पर्दा भनौ या अप्ठ्यारो परीस्थितीमा जहिले आत्तिने गर्छौ। तर यो जरुरी हुन्छ कि हामीले त्यो परीस्थितिसंग जुदनै पर्ने हुन्छ ।यसलाई थोरै विस्तृतमा बताउन चाहे । एकपटक एक जना वाबु र उसको ११ बर्षको छोरा उनीहरुको बगैचामा डुल्दै थिए ।यत्तिकैमा छोराले एउटा पुतली बन्दै गरेको लार्भा देख्छ । ऊ निकै रमाउछ । वाबुले भन्छ कि छोरा तिमीलाई खुसि लाग्छ हेर तर जे सुकै होस् तिमि यसलाई नछुनु भन्छ र पुरै बगैचा चाहार्न तिर लाग्छ । त्यो वालक त्यहि पुतली वन्दै गरेको लार्भालाई हेर्दै रमाईरहनछ । यत्तिकैमा वालकले त्यो लार्भा बाहिर निस्किन खोज्दै गरेको तर त्यसलाई निर्दयी रुपले कस्ट्युमले छोपेको कारण ऊ बाहिर आउन नसकेको देख्छ । यस प्रक्रियामा उसले धेरै प्रयास गर्छ र पनि असफल हुन्छ ।यो देखेर वालक एकदमै दुखि र निरास बन्न पुग्छ । उसले आफ्नो मनलाई त्यति निष्ठुर पार्न सकेन जति त्यो कस्ट्युमले वाधक बनि पिडा दिन सफल भएको थियो । लगत्तै उसले त्यस पुतलीलाई बाहिर निकालिदिन्छ र खुसि हुन्छ ।तर उसको खुसि केहि पलको लागि मात्र सिमित हुन् पुग्छ कारण त्यो पुतली क्षणभरमै एक निर्जीव वस्तुमा रुपान्तरण हुन्छ । आखिर किन मर्यो होला त् त्यो पुतली ? त्यस वालकले त् केवल उसको लागि सजिलो पार्ने कोशिश गरेको थियो । तर पनि किन त्यस्तो परीणाम आयो त् ? कुरा साधारण नै छ , जुन परिस्थिति पुतलीले भोगिरहेको थियो त्यो कुनै संघर्ष थिएन ,त्यो त केवल प्रकृतिको तयारी थियो कि पुतली लाई उड्नको लागि र बाहिरी वातावरणमा Survive गर्नको लागि सक्षम बनाउने । तर यो कुराले त्यो वालकले बुझन सकेन र कसरी यस अप्ठ्यारो परिस्थिति बाट छुटकारा दिलाउने भन्ने सोच्नतिर लाग्यो । हुनसक्छ त्यो परीस्थितिमा नाजुक पुतलीले पनि त्यस्तै सोचेको होस् । तर वास्तवमा ति दुवै गलत सावित हुन् पुगे । हाम्रो वास्तविक जिवनमा पनि यस्तै भैराखेको हुन्छ । कयौ अप्ठ्यारो परिस्थितिहरु आउछन जिवनमा तर हामि त्यस संग जुध्नुको सट्टा भाग्ने गर्छौ । जसको कारण हाम्रो पनि परीणाम त्यहि पुतलीको भन्दा फरक हुदैन । त्यसकारण अवको निकट भविष्यमा जति पनि दुख कष्ट बाधाहरु आउछन ,त्यसको लागि तपाइँ हामि भगवान / अल्लाह लाई धन्यवाद गरौ कि उहाले यस चुनौतिको लागि मलाई सक्षम / योग्य सम्झनु भो भनेर । जहिले पनि एउटा कुरा यो नबिर्सनुस कि हरेक समस्याले कम्तिमा आफु जत्रै या त्यो भन्दा पनि ठुलो Opportunuty साथमा लिएर आएको हुन्छ ।
2.Complain & Blame गर्न छोड्नुहोस |
यदि तपाइँ जिवनमा साच्चिकै एक आदर्श जीवन जिउन चाहानुहुन्छ भने कहिल्यै पनि अरुलाई दोष नदिनुस् । भन्नुको अर्थ तपाइले तपाइँ आफु जहा जे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यसको सम्पुर्ण जिम्मेवार तपाई आफैलाई ठान्नुपर्ने हुन्छ। प्राय हामीले राम्रो काम भएको छ भने त्यसको क्रेडिट लिन त् खोज्छौ तर कुनै काम जानाजान या अन्जानमा गलत ठहरियो भने हामि त्यसको आरोप आफूमाथि लिन चाहादैनौ ।विभिन्न परिस्थिति अनुसार कहिले आमावावुलाई दोष , कहिले साथि , कहिले बोस ,कहिले श्रीमती ,कहिले दाजुभाई त् कहिले दिदीबहिनी , कहिले समाज ,कहिले देशलाई दोष दिने गर्छौ। तर यो सब ति खोक्रा व्यक्तिहरुको निशान हो जो आफैसंग डराईरहेका छन् तर आफुलाई सहि सावित गर्ने वेअर्थको निरन्तर प्रयास गरीरहेका छन् । त्यसैले responsibility लिऔ दिव्य र सभ्य बनौ ।
जीवनको सबैभन्दा महत्वपुर्ण चिज मध्ये स्वास्थ्य पनि एक हो । तपाईले पनि सायद कहिँ न कहिँ सुन्नुभएको छ ,पढ्नुभएको छ कि “स्वास्थ्य नै धन हो ” भन्ने ।र त्यहि स्वस्थ जीवनको लागि नभई नहुने एक सानो क्रियाकलाप Daily Exercise हो ।हामीले कम्तिमा पनि दैनिक १५ मिनेट जति Exercise गर्न जरुरी छ । यदि तपाई Physical कामहरु नै बढि गर्नुहुन्छ भने हुनसक्छ तपाईलाई Daily Exercise को आवश्यक नपर्ला तर जति पनि दिनभरी केवल Mental Exercise मात्र गर्ने हुनुहुन्छ ,तपाई हाम्रो लागि Morning मा केहि Simple Physical Exercise हरु गर्नु अत्यन्त जरुरी छ ।
4.कृतज्ञ बन्नुहोस (Be thankful)
अधिकांस व्यक्तिहरु यसकारण दुखि हुदैनन् कि उनीहरुसंग केहि छैन , अक्सर उनीहरु यसकारण दुखि हुन्छन कि आफुसंग भएको कुरालाई चिन्न सक्दैनन् ।एकपटक ;याद गर्ने कोशिष गर्नुस जब तपाई भगवानसंग केहि प्रार्थना गर्नुहुन्छ तब के भन्नुहुन्छ ? ९९ % मानिस मानिसले यहि भन्छ कि हे भगवान मलाई सुख देऊ , दुख कहिले पनि नपरोस । धेरै धन सम्पत्ति देऊ समस्या कहिल्यै आईनपरोस , ठुला ठुला घर गाडि मिलोस , म परीक्षामा पास /टप हुम् । अरे एकैछिन बिचार गर्नुहोस त् यो तपाई प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ या भगवानसंग भिख माग्दै हुनुहुन्छ ? मलाई लाग्छ यस प्रश्नको जवाफ तपाई आफैले नै भेटिसक्नु भएको छ । हामि भिखारी बन्ने कि एक दिव्य व्यक्ति बन्ने त्यो हाम्रो रोजाई हो । पक्कै पनि अहिले सम्म तपाईले यहा पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको रोजाई एक दिव्य व्यक्ति बन्ने नै हो । तर मनमा एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ कसरी त् ? जवाफ : भगवानले हामीलाई त्यस्ता धेरै कुरा दिएका छन् जसको लागि हामि भगवानप्रति कृतज्ञ (Thankful/greatful) बन्न अत्यन्त जरुरी छ । एकैछिन त्यतातिर ध्यान पुर्याऊ । यो संसारमा कति व्यक्तिहरु त्यस्ता छन् जसको जन्मदै हात खुट्टा चल्दैन ,कति व्यक्तिहरु त्यस्ता छन् जसको खुट्टा छैन , कसैको हात हुदैन । र कति व्यक्तिहरु त्यस्ता छन् जसको खुट्टामा राम्रो जुत्ता छैन जसकारण उनीहरु दुखि छन्, उनीहरु यो कहिल्यै बुझ्दैनन् कि यहि संसारमा त्यस्ता व्यक्तिहरु पनि छन् जसको फाटेको जुत्ता लगाउन एउटा पनि खुट्टा छैन । त्यसैले त्यो भगवान प्रति कृतज्ञ हुनुस जसले तपाईलाई दुई सुन्दर हात र मजवुत खुट्टा दिएका छन् । अनि यो पनि नभुल्नुस Last Night हजारौ व्यक्तिको लागि साच्चिकै Last Night नै भएको छ । तर तपाइले फेरी नया जिन्दगि पाउनु भएको छ , नया अवसर मिलेको छ यो सुन्दर जीवन जीउनको लागि । त्यसको लागि पनि भगवानप्रति पुन कृतज्ञ हुदै हरेक दिनको विहानी सुरुवात गर्नुहोस ।
5.अरुले के सोच्छ त्यो तपाई नसोच्नुस (Don’t care about what people think)
यस बिषयमा म तपाईलाई एउटा मेरो आफ्नै व्यक्तिगत अनुभव सुनाउन चाहान्छु । समय त्यस्तै केहि बर्ष पहिले स्कुल पढ्दै गर्दाको कुरा हो । म मेरा साथीहरु भन्दा अलि भिन्न थिए । कारण म मा एउटा ठुलै रोग थियो जसको परीणाम त् मैले भोगेको नै थिए तर रोग नै छ भन्ने सुईको समेत मैले पाएको थिएन। त्यस पिरियडमा म त्यति बोल्दैन थिए निकै कम बोल्ने गर्थे । यहासम्म कि आवश्यक कुरा पनि म बोल्न सक्दैन थिए । स्कुल जाने पढ्ने आउने । स्कुलमा पनि त्यति खुलेर बोल्न सक्दैन थिए । साथीहरुमा पनि १/२ जनासंग मात्र खुलेर बोल्ने गर्थे । अर्को अचम्मको कुरो यो सम्म भयो कि म घरबाट केहि बाहिर निस्किनुपर्यो भने मनमा यहि कुरा खेलाउथे कि गाउमा कोहि घर बाहिर त् छैन ? ताकि उसले मलाई देखोस । मलाई मनमा यहि डर हुन्थ्यो कि कसैले मलाई देखेर केहि भनि पो हाल्ने हो कि । गलत त्यस्तो केहि गरेको हुदैन थिए तर यहासम्म कि कसैले मलाई देख्दा पनि मलाई अप्ठ्यारो महसुस हुन्थ्यो । मैले सधै यहि सोच्थे कि उसले मेरो बारेमा के सोच्ला ! यो सबको कारण त्यहि रोग हो जुन रोगले म मा जरा गाडिसकेको थियो । हिन्दी भाषामा एउटा भनाई यो छ “सब्से वडा रोग क्या कहेंगे लोग ” ।
हुन्स्सक्छ तपाईहरु मध्ये कोहि मेरो जस्तै अवस्थामा गुज्रीरहनु भएको छ भने कोहि त्यो अवस्था पार गरीसक्नुभएको छ र यो पनि हुनसक्छ कि कोहि यस्तो रोगको सिकार नै हुनु भएन । यदि सिकार नै हुनु भएको छैन भने यसको मतलव यो हैन कि तपाई विल्ल्कुल स्वस्थ हुनुहुन्छ । कहिँ न कहिँ यसले तपाइलाई अल्झाउने कोशिषमा रहिरहन्छ । जे होस् हामि सबै यसबाट टाढा रहनु आवश्यक छ । दुनियाको काम नै हो कुरा काट्ने उनीहरुलाई कुरा काट्न दिनुपर्छ । तर हामीले उनीहरुको कुरालाई बेवास्ता गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा यहि असफलताको मुख्य कारण बन्नसक्छ ।हामिले धेरै कुराहरु गर्ने सोचेका हुन्छौ तर हामीले यहि डरले कामको सुरुवात पनि गर्न सक्दैनौ कि यदि म असफल भए भने दुनिया हास्ने छ म माथि भनेर । दुनिया तपाइँ माथि हास्छ भने एउटा कुरा यो याद गर्नुस कि दुनियालाई हसाउने पनि एउटा महान कार्य नै हो । मेरो बारेमा उसले के सोच्ला भन्ने सोचेर तपाई आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुस ।किनकि उसले सोच्ने कुरा तपाई सोच्न थाल्नु भो भने फेरी उसले के सोच्ने ? उसको लागि भएपनि त्यति सोच्ने काम उसलाई नै छोडिदिनुस ।
6.हरेक दिन केहि नया सिक्नुहोस (Learn Everyday Something New)
समय निकै परिवर्तनशील छ । हामिले यो समयसंग तालमेल मिलाउन निकै जरुरी छ अन्यथा हामि समयको एक यस्तो चेपटामा पर्ने छौ जहा बाट हामि न त् सजिलै भाग्न न नै सक्छौ न त् समस्यासंग जुध्न नै । भन्नुको सिधा अर्थ यो हो कि यस परीवार्तानाशील समयसंगै हामीले आफुलाई Upgrade गर्न सकेनौ भने समयले नै हामीलाई एक दिन बाध्य भएर परीवर्तन गर्ने छ र यो नबिर्सनु कि त्यस्को पिडा भने पक्कै पनि असहय हुने छ ।जुन दिन तपाइले सिक्न छोड्नुहुन्छ त्यहि दिन बाट तपाईको सफलताको बाटो बन्द हुनेछ । त्यसैले हरेक दिन तपाइँ कुन जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्नुस् आफ्नो क्षेत्रको केहि न केहि थप ज्ञान बढाउनुहोस र अरुभन्दा अलि फरक र स्मार्ट बन्नुहोस । हुनसक्छ भोलि त्यहि आज सिकेको सानो कुराले तपाईलाई ठुलो फाईदा मिलोस ।
7.अरुलाई नआक्नुस ,आफ्नो कामसंग मतलव राख्नुस (Don’t judge ,Mind your own business)
के तपाइँलाई लाग्दैन कि उसले के गर्दै छ उसले यस्तो किन गर्दै छ , सलमानको बिहे नहुनुको पछाडी रहस्य के छ ? भन्ने यस्तै प्रश्न गर्दै केवल अरुको जिवनमा के भैरहेको छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुदाहुदै हामीलाई यो थाहा हुदैन कि हाम्रो आफ्नो जीवनमा के भैरहेको छ भन्ने । हामीले आफ्नो जिवनमा अरुको लागि यति स्पेस / महत्व दिन्छौ कि हामीले आफ्नै जिवनमा के भैरेको छ भन्ने कुरा बुझ्न पनि हामीसंग समय हुदैन । हामीले दिनभर Social Media मा अरुको जिन्दगीमा के भैरहेको भन्ने कुरा हेरेर पुरै दिन बिताईदिञ्छौ तर आफ्नो जिन्दगीमा के भैरहेको छ भन्ने बुझ्न १० मिनेट पनि समय हुदैन । तर वास्तवमा यदि तपाई जिवनमा अगाडि बढ्न चाहानुहुन्छ र जिवनमा केहि सकारात्मक परीवर्तन चाहानुहुन्छ भने अरुकॊ आकलन (Judge ) गर्न छोड्दिनुस र आफ्नो कामसंग मतलव राख्नुहोस । तपाईलाई स्मरण रहोस हाम्रो समाज यस्तो समाज हो जहा कसैको घरमा साझामा महत्वपुर्ण काम गर्दागर्दै बिजुली बत्ति गयो भने सबैभन्दा पहिले छिमेकीको घरमा हेर्छौ यो पत्ता लगाउन कि कहिँ उसको घरमा बत्ति बलेको त् छैन ? त्यो बेला पनि हामिलाई जतिसुकै महत्वपुर्ण काम होस् आफ्नो काम रोकिएको दुख भन्दा छिमेकीको घरमा बत्ति नभएको कुराले खुसि धेरै दिन्छ । र यो पनि स्मरण रहोस यो कुनै आदर्श व्यक्तिको गुण होइन । त्यसैले यो घिसिपिटी कुराहरुमा आफ्नो समय खेर नफाल्नुहोस । समय निकै महत्वपुर्ण छ ।
8.सानो कुरामा नै खुसि खोज्नुस (Enjoy Small Things)
जीवन जिउने कला बुझनु मात्र पर्छ जीवन निकै सुन्दर लाग्ने छ । हामि सधै ठुलो ठुलो उपप्लब्धिको पछाडी भागिरहेका हुन्छौ। ठुलो सफलताको पछाडी भाग्ने क्रममा हामीले हजारौ सानातिना उपलब्धिहरुलाई नजरअन्दाज गरीरहेका हुन्छौ । सफलता चाहानु कुनै गलत कुरा होईन तर एक सफलताको लागि हजारौ खुसिहरुको वली दिनु विल्कुल न्याय होइन ।
आजको दिनबाट अलि भिन्न हुनुस। फरक बन्ने प्रयास नगर्नुस एक संग्कल्प लिनुहोस् कि आजको दिन पछि होइन आजैबाट हरेक पल भरपुर जिउने छु । तपाईले यति सुन्दर जीवन पाउनु भएको छ , यसको लागि खुशी हुनुहोस । तपाईलाई थाहा छ ? प्रत्येक मिनेट विस्वमा औसतमा १०५ जनाको मृत्यु भैरहेको हुन्च्छ , प्रति घण्टा ६,३१६ जनाको मृत्यु भैरहेको हुन्च्छ । तपाई खुसि हुनुपर्ने कारण यो पनि होकी तपाई त्यस १०५ या ६३१६ जनामा पर्नु भएन ।
तपाई सास लीइरहनुभएको छ खाना खाईरहनु भएको छ , पानि पीईरहनु भएको छ , तपाईको आफ्नै घर छ ।के यो खुशीको कुरा होइन ? कसैको त् आफ्नो आमाबाबु नै हुदैन तर तपाईको लागि त खुसि किनिदिने सिंगो परीवार छ के तपाईलाई यो कुराले खुसि दिन सक्दैन ? यदि ठुलो सफलतामा मात्र खुसि हुने हो भने त् हामि जिवनमा सायदै खुसि हुम्ला । त्यसैले ठुलो सफलतामा मात्र खुसि हुने होइन कि यस्तै सानो सानो कुरामा पनि खुसि खोज्नसक्नुपर्छ ।
9.विगतको धेरै पछाडी पनि नहेर्नुस (Never look back too Long)
10.गलत संगत छोड्नुहोस (Avoid negative people & groups)
11.विचारमा काम गर्नुहोस (Take Action)
Categories Select Category Digital Marketing (1) Education (1) Motivational(प्रेरक ) (6) New Update (2) Tech (6) साहित्य (4)
म आज छोरी ,भोलि बुहारी किन ? June 30, 2020
Link For Registration June 12, 2020
“सोच “सफलताको विऊ। June 7, 2020
बिडम्वना मनको -By Dhan Bdr Funjali May 15, 2020
एक पृथक भाव -By Dhan Bdr Funjali May 10, 2020
This is the Official Website of Mr.Bijay Balal ,where you can get his personal opinion or some life changing powerful thought.
जीवन जति सरल उति नै जटिल पनि छ ।त्यसैले
Don’t leave your life.